Core Training For Golfers│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Core training for golfers isamust for developing maximum power and distance. As in all athletics, the core is your engine. Everything comes from the core! The modern golf swing is definitelya‘core-focused’ လှုပ်ရှားမှု; unlike the older swing technique of lower body action dominant. You probably have heard the term core training for golfers, but do you know what it means and how to implement it into your golf performance routine? Your core is the middle section of your body’specifically your abdominal region. If your core is weak or restricted in rotational flexibility, you will haveaminimal chance at hitting long drives. I see this all the time in the senior golfer. No core strength or flexibility, resulting inaHUGE decrease in yardage off the tee. The senior golfer will say things like, ‘I’ve lost so much yardage off the tee the past few years’; ‘I use to hit my drives 50 yards further’; ‘If I could only get 20 more yards I’d be happy’. This can beavery frustrating situation; but one that can be remedied easily, quickly and in the convenience of your home with minimal equipment. Improving your core rotational strength and flexibility does not require equipment inagym or club. You can do exercises as simple as grabbingasingle handweight, getting in your golf posture, and rotating back and through holding the handweight in front of your stomach. You can also do stretches right in your office chair. Sitting upright and reaching around your chair, turning as far as you can to the right, then turning to the left. These are just some very basic core training for golfers exercises, but they would give youa‘kickstart’ into doingacomplete program for your core. You will be amazed at how much power you acquire in your swing when you implementacore training for golfers program. Even if that’s all you did for the time-being, you’d be way ahead of the game. But my guess is once you start slow and easy, you’ll get the ‘runners high’ and want to do more. This does not have to beagut-busting routine! You can spend as little as 10 minutesacouple of timesaweek and see results. Don’t put it off any longer! Start your core training for golfers today! Core Training For Golfers
Crappie ငါးဖမ်းဆွဲဆောင် – အသုံးပြုရန်
ကိုယ်ခံပညာမူလစာမျက်နှာသင်တန်း – စုံလင်ခြင်းအဘို့အ Tools များ!
Willis Mcgahee : 2001 နေ့ပုံမူကြမ်း
ငါးဖမ်း Reel အခြေခံ
ဗာဂျီးနီးယား Woodlands ၏ဘုံတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကိုကြည့်ရှုခြင်း
သင်၏ ၂၁ ရာစုအတွင်းပိုင်းကိုဂျပန်ပုံစံဖြင့်အလှဆင်ခြင်းသည်လူကြိုက်များလာသည်. ဂျပန်အပိုငျးအ, ဆာမူရိုင်းဓားကဲ့သို့, အရောင်များနှင့်ပုံသဏ္eyeာန်များကိုမျက်စိဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်ရုံသာမကအဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသောကြောင့်အရသာအလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည်. သူတို့ကသည်းခံခြင်းလိုကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းတွေကိုကိုယ်စားပြုတယ်, စည်းကမ်း, ဂုဏ်ယူပါတယ်, သစ္စာရှိမှုနှင့်ပြဌာန်းခွင့်. ခေတ်သစ်ကမ္ဘာသည်အလွန်အရေးကြီးသောကုဒ်အချို့ကိုမေ့သွားသည်, but their symbols still exist asareminder in the Japanese works of art that distinguish some homes or offices. The samurai swords, ဥပမာ, are very used objects of decoration. People who appreciate martial arts or the Japanese life style often hang them on walls. Owning samurai swords means you appreciate Japanese history and the virtues that this object stood for in an antique society. For those of you with the good idea of buying samurai swords here are some hints about these beautiful and meaningful objects and their philosophy. Knowing how they are made and their value will make them more treasured decorating objects. The value of the samurai swords comes not only from their handcrafting, but also from the fact that they areasymbol of the worrier. The samurai swords define power, duty, responsibility, self-defense and ethics. The samurai swords were weapons used byaclass of people who cherished their freedom above all and defended it with great skill. The samurai swords were used in hand to hand combat which wasavery demanding perhaps the most, form of combat. Having to fight withasharp weapon required skill of body and mind, abilities, reflexes and technique. Only throughalot of practice, exercise and patience one could become able to handle the samurai swords in order to protect the code of honor. The Samurai (knights-retainers) were also called Bushi (warriors) and their most treasured weapons were the samurai swords. They considered the swordsapart of themselves and sometimes believed the swords were the soul of their worriership. They gave their samurai swords names and awarded them medals. Some samurai worriers even died trying to retrieve their treasured samurai swords for their Shogun (the most powerful samurai worrier foraperiod). Bushido means Way of the Warrior and the heart of the Bushido philosophy, which lead their beliefs and conduct, is freedom from fear. This meant they had no fear of dying. They were able to use their peace of mind to give themselves power to serve their master faithfully to the death. ထို့ကြောင့်, duty and loyalty wereagreat part of their philosophy. Their way of life ranked them at the top of the social hierarchy in Japan for hundreds of years until 19th century. Artisans of ancient time putalot of thought in the creation of samurai swords. They had to create weapons that were not too heavy to handle, nor too rigid to brake off. They discovered sharp samurai swords, used against an armor, broke and that samurai swords made of soft steel were flexible and light. ဒီတော့, they considered the most appropriate weight for samurai swords would have been around 2-3 အလေးချိန်ပေါင်. သို့သော်, to create such samurai swords would have meantalot work. There were many methods used to handcraft samurai swords. Some used the repeated and tiring process of heating and folding of steel. The blades had to be polished afterwards carefully and the smiths engraved their signature on their work of art. The samurai swords were proof of great handcrafting skills, which meant that the person who created them possessed some unique virtues. Like for any art object, to create samurai swords meant to put soul in your creation, to invest patience and will together with intelligence to obtain the best results possible. A lot of artists worked on their detailed ornaments of the hilt, on their handle bindings and sheaths and the results were samurai swords worth being worn by worriers. These virtues have been forgotten as the modern society no longer cares, respects or praises the military man as much as in the past. The samurai were (and still are) highly appreciated figures of history. The samurai swords were priceless and were identified with the worrier class. Made from the heat and pounding of skilled smiths, the samurai swords brought honor and the spirit of the true worrier to those who carried them. ဒီအတွက်ကြောင့်, many modern people buy samurai swords asareminder of that time and those values. Samurai swords decorate today’s homes, as symbols, for those who know what true beauty means virtue and honor. ဆာမူရိုင်းဓားများ၏ဒphilosophန
မိမိကိုယ်မိမိသံသယ, ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးလား, & အောင်မြင်မှုအတွက်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုဖျက်ဆီးသောမြင်းစီးသူရဲသုံးယောက်အားကြောက်ရွံ့ပါ. သင့်တွင်ဤခံစားချက်တစ်ခုရှိပါကအခြား ၂ ခုသည်အနီးအနားတွင်ရှိသည်. အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စွမ်းရည်သည်တိုက်လေယာဉ်တစ်ခုအနေနှင့်သံသယဖြစ်နေလျှင် (သို့) သင်၏ပြိုင်ဘက်ကိုမည်သို့တိုက်ခိုက်မည်ကိုမတိုက်ဆိုင်လျှင်, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အလိုအလျှောက်ကန်လိမ့်မယ် & လွှဲယူသည်. လက်စွပ်မ ၀ င်ခင်ခင်ဗျားအနိုင်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဆုံးရှုံးသွားမှာပါ. ဤရွေ့ကားစိတ်ခံစားမှုစိတ်ကိုကြောင့်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ် / ခန္ဓာကိုယ်ဆက်သွယ်မှု. သင်သည်သင်၏နည်းစနစ်များအပြည့်အဝကျူးလွန်အပေါ်တွန့်ဆုတ်ပါလိမ့်မယ် & တိုက်ခိုက်နေစဉ်ပေါင်းစပ်. ဆုံးဖြတ်ချက်မချခြင်းကြောင့်သင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုကြေးနန်းရိုက်ကူးပြီးခိုင်မာသောကြောင့်သင်၏နည်းစနစ်များလျင်မြန်စွာနှေးကွေးလိမ့်မည် & တင်းကျပ်. တိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့, ကြောက်စိတ်ကိုဆိုလိုတာ, လူသားတွေဟာမတူကြဘူး. ကြောက်ရွံ့မှု၏တုန်ခါမှုသည်စိတ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့တစ်ခုသို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိသွားသည် & အကယ်စင်စစ်လူ့အသံကဲ့သို့. လက်စွပ်ကိုဖြတ်ပြီးမင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကမင်းရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုခံစားရလိမ့်မယ် & မိမိအအားသာချက်ကအသုံးပြုပါ. မြင်းစီးသူရဲသုံးယောက်သည်သင်၏ခေါင်းစဉ်ကိုလက်စွပ်၏အတွင်းအပြင်တွင်မပြောဆိုမီကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်သည်. ဒီနေရာမှာအကြံပြုချက်တချို့ရှိပါတယ် 1. သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်စိတ်ထဲကနေစဉ်းစားပါ, သူဘာလုပ်မှာလဲ? 2. စောင့်ကြည့် & သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်သည်သူ၏ဂိမ်းအစီအစဉ်၏အဓိပ္ပာယ်ရရန်တိုက်ပွဲတွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 3. အာရုံစူးစိုက် & သင့်ရဲ့အားသာချက်ကိုသူရဲကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့သတိရစေပါ. 4. ညမအိပ်ခင်ညမှာမင်းရဲ့ရန်ပွဲအစီအစဉ်ကိုမင်းစိတ်ထဲမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ & တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့သင်ဘာလုပ်မလဲ 5. သင့်စိတ်တွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောရန်ပွဲအစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည် & အဲဒါကိုကပ် “အောင်မြင်မှုရရှိရန်အစဉ်အလာသင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၏ SKIN.IF တွင်သင်ကိုယ်တိုင်နေရာချသင့်သည်။, သင်ရှုံးလိမ့်မယ် 100% သင့်ကိုနားလည်နိုင်သည့် TIME.IF OF သင်အောင်မြင်လိမ့်မည် 50% ထိုကာလ၏. သင့်ကိုယ်သင်နားလည်ပါက & သင်အနိုင်ရတဲ့အတိုက်အခံပါတီ 100% ထိုကာလ၏။” Tsutomu Oshima မြင်းစီးသူရဲသုံးယောက်
ငါ Silver, Lotto System ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖောင်းပွမှုအားလုံးသို့ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းပြီးနောက်ရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်. ထီဆုအတွက်သင့်ကိုကူညီနိူင်တဲ့စနစ်ရှိပါသလား? ဤအကျဉ်းချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤမေးခွန်းနှင့်သင်ရှိကောင်းရှိနိုင်မည့်အခြားသူများကိုဖြေကြားပါမည်, Silver Lotto System သည်သင်၏အချိန်ဖြုန်းတီးသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ကိုကောင်းသောအကြံဥာဏ်ပေးရန်အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြင့်အားလုံး. ငါထီကစားရတာကြိုက်တယ်, ငါနိုင်မယ်ထင်လို့မဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့အတွက်ဒါပုံဆွဲသည်အထိငါ jackpot ကိုဘယ်လိုသုံးရမည်ကိုစီစဉ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်. ငါ Lotto အနိုင်ရငါ့ကိုကူညီနိုင်နှင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်ရှိငွေရှင်းကောင်တာတွင်တစ် ဦး ‘အမြန်ရွေးပြုစေခြင်းငှါပိုမိုထိရောက်သောသောအထဲကအဲဒီမှာအဲဒီမှာစနစ်တစ်ခုရှိကွောငျးကိုငါကြားသောအခါ’ ငါ၏နံပါတ်များကို၏, ငါစိတ်ဝင်စားနှင့်သံသယဖြစ်ခဲ့သည်. ငါငွေ Lotto စနစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ထိခိုက်စေနိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ကသို့ကြည့်ရှုအပေါ်သို့, ငါဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာအနိုင်ရဖို့ငွေ Lotto စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့လူများစွာရှိပါတယ်. ငါထိုကဲ့သို့သောအကြီးအခြေရာခံရှိသည့်စနစ်အကြောင်းကြားဘယ်တော့မှချင်ပါတယ်. မည်သည့်နိုင်ငံမှမဆို Lotto ဂိမ်းအများစုအတွက်အလုပ်လုပ်သောစနစ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးဂိမ်းရှိသည်အဖြစ် 5-7 ဘောလုံးနှင့်အောက်တွင်ဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်များရှိသည် 70 သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်. Silver Lotto System တွင်ကုန်ကျစရိတ်ထပ်ထပ်တိုးခြင်းမရှိပါ, သငျသညျဖဲ့လျှင်ဒါကြောင့်နေဆဲအလားအလာအစီအစဉ်ကိုဖွင့်. Silver Lotto System ၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာအပိုဆုကြေးဖြစ်သည်. သင်အစီအစဉ်ကိုဝယ်တဲ့အခါ, သင်ထက်ပိုသောတန်ဖိုးရှိသောနံပါတ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုသင်လုပ်သည် $150! များစွာသောများအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောစနစ်ဖြစ်သည်, ငါဆင်းရဲခြင်းကိုငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်သူတို့ကို jackpots မပေးသောထီလက်မှတ်အပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းသောသူမည်သူမဆိုဖို့ Silver, Lotto စနစ်ကအထူးအကြံပြုလိုတယ်. ငွေ Lotto စနစ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – ကောင်းလားဆိုးလား?
ဒီတော့, your golf swing needs improvement and you know it? Here are some tips in making better golf swings. Tip no. 1. A great golf swing does not mean you have to swing with arms. Behind your back, put your golf club while you turn your back to your target. It is like taking your club back as you hinge your arm at your shoulder. You could also practice the drill known as no arms. Tip no. 2. You should not forget cocking wrists. Do not forget cocking your wrists. This might be difficult at first, but it will be natural to you with enough practice. Tip no. 3. You should let the left arm clockwise slightly when you start the back swing. It is not really something that you actually should remember. It naturally happens if you would just allow it. This just means that you should not resist this movement that is just natural. You might not notice it, but you might have been resisting this movement because this causes the head of your golf club to go open slightly when you swing it. Just allow it to happen. Tip no. 4. Plant your feet firmly on the ground. You might have copied this from baseball. ဒါက, letting your foot heel in front to come above the ground when you swing your golf club back. Some people think that by doing this so, their back swing feels more huge. It is something that seems lifting the front heel can easily make the body coil and for the tension to build that much harder. Letting the foot roll freely to the inside is fine. သို့သော်, one should keep that foot on the ground to make golf back swing well-anchored. Tip no. 5. From the bottom golf down swing. Assuming that you accomplish all the drills correctly ‘ from the golf stance, the golf grip you have, and your golf back swing. But you can still ruin everything if you begin the golf swing that you have with the shoulders. You might want to useaswing trigger to begin the golf down swing that you have with the lower part of your body. Tip no. 6. And again, on your golf down swing. You should turn the belt buckle to your target. Try turning your hips as powerful and fast as possible when you do your golf down swing, it works. Some Tips To Improve Your Golf Swing
သင်ကအားကစားအသစ်ဖြစ်ဖြစ်၊, ကယက်လှေတစ်ခုသို့မဟုတ်ကနူးဝယ်သည့်အခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများစွာရှိသည်. သင်စျေးကွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်, သင်ချက်ချင်းလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်. မော်ဒယ်များအများကြီးရှိတယ်, စတိုင်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောစျေးနှုန်းပ္ပံ. ဘယ်လိုကမ္ဘာပေါ်မှာသင်ရွေးချယ်မလဲ? သင်ပိုင်ဆိုင်လိုသောလှေဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ကနူးလှေဝယ်ယူရန်အတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ရှိပါသည်. ပထမတစ်ခု: သင်ကယပ်လှေသို့မဟုတ်ကနူးနှင့်အတူဘာလုပ်မလဲ? သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်အရာမှာသင်ပေါ်ရှိရေအမျိုးအစားဖြစ်သည်. ဥပမာ, သင် Rapids ယူလိုလျှင်, သငျသညျရုံခရီးကိုခံစားရန်စီစဉ်ထားသည်ထက်သင်တစ် ဦး အများကြီးပိုမိုအားကောင်းယပ်လှေနှင့်ကနူးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်ရွေးစရာလေးခုရှိသည်. သူတို့သည်အပန်းဖြေနေကြသည်, ခရီးသွား, whitewater နှင့် downriver ဗားရှင်း. နှစ်ချက်: သင်၏အရှည်နှင့်အကျယ်ကိုသိပါ. သငျသညျပိုမိုလွယ်ကူလှော်ရလိမ့်မယ်, ကြာရှည်လှေလှော်လှေမှပိုမိုတည်ငြိမ်မှုနှင့်ပိုမိုလေးသောဝန်စွမ်းရည်. သို့သော်ငြားလည်း, မင်းပေါ့သွားပြီ, စျေးသက်သာပြီးပိုမိုတိုတောင်းသောရေလှောင်ကန်မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလွယ်ကူစေသည်. width ကို, ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီထက်ပိုပြီးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာကပိုကျယ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလိုချင်တယ်. သိကောင်းစရာသုံး: ကိုယ်ထည်သည်အရေးပါသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်. ပြားချပ်ချပ်ခွံနှင့်အတူကိုယ်ထည်ရှိသည်သောသူတို့အား, လည်ပင်းရှိအူများထက်မာကျောသောလည်ပင်းနှင့်အပိုမီးတောက်များသည်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်. သို့တိုင်, ပတ်ပတ်လည်ကိုယ်ထည်လည်းသူတို့ကျော်ရေကူးကြလျှင်လှိမ့်ဖို့ပိုလွယ်ကူလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်. ဒီတော့, သင်ကယပ်လှေတစ်စီးသို့မဟုတ်ကနူးဝယ်ရန်ရှာဖွေနေချိန်တွင်ဤအရာအားလုံးကဘာကိုဆိုလိုသနည်း? အမှန်မှာ၊ သင်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာတစ်ခုစီကိုသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်. ဒါပေါ့, သင့်မှာရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းစဉ်းစားသင့်တယ်. သငျသညျအားကစားအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အသစ်တစ်ခုကိုသင်ဝယ်ယူရန်သင်သွေးဆောင်ခံရနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အနိမ့်ဆုံးသွားတာကပညာရှိပြီးအားကစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်တာတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်. သတင်းကောင်းတစ်ခုမှာသင်သည်ကယောင်လှေသို့မဟုတ်ကနူးဝယ်ရန်ထွက်သွားသောအခါ, သင်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာကယေဘူယျအားဖြင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရဖို့အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည်.3ကကရက်သို့မဟုတ်ကနူးဝယ်ရန်အတွက်အချက်များ
ကရာတေး၏သမိုင်းသည်ရှည်လျားပြီးအကြီးအကျယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်, ဂျပန်နှင့်အိုကီနာဝါမှပင်လယ်ရေကိုဖြတ်ပြီး, ရှေးခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲသို့တရုတ်နိုင်ငံနှင့်တောင်တန်းများကြားတွင်တည်ရှိသည်. အများအပြားကရာတေးကာလေ့ကျင့်ရေးအတွက်, စတိုင်လ်, အတိတ်နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏နောင်တော်များကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်ကျေနပ်မှုရှိပါသည် (သို့မဟုတ်ပါကနီးစပ်) နှင့်, အစဉ်အလာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်, တန်ဖိုးများနှင့်အလေ့အကျင့်များဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေဆဲအသုံးဝင်သောနှင့်အရေးကြီးသောယူဆသည်. ဒါပေမယ့်ရိုးရာကဘာလဲ? Through the ages, martial arrs undergo many changes: they adapt to new circumstances, they branch-off and are altered, they are lead by new people. Others die with their inheritors. အဆုံးမှာ, what we have may be likened to the message inagame of Chinese whispers; altered from its origins by so many people that any obvious links to its beginnings may be hard to find. The many stories that make up karate’s history have not escaped the Chinese-whisper syndrome. Modern karate’s origins have been the subject of research and debate for so long that the history of karare now has its own history! This is partly because unearthing karate’s earliest predecessors requires mapping the entire history of the martial arts in the East. Many know Okinawa, an island 550 kilometres south of the Japanese mainland, as the birthplace of karate. But let’s look first to Japan, considered home to most karate systems existing today. Karate is now practised in an estimated 120 countries and takes many forms. Of these, some of the most famous were founded in Japan after World War II, prominent examples being Mas Oyama’s Kyokushin and Choiro Tani’s Shukokai. At the same time in Okinawa, the dominant schools (Ryu) were Shorin-Ryu, Goju-Ryu, Uechi-Ryu and Matsubayashi-Ryu. Although there had been karate demonstrations outside Japan in the late 1920s and ’30s, it was in the post-war years that karate arrived in European and Western countries like Australia. The Japan Karate Association, formed in 1948, assisted in spreading karate world-wide. The many styles that developed inside Japan all grew from various Okinawan karate systems introduced to Japan early in the 20th century. Around 1902, karate was added to Okinawan schools’ physical education programs and the secrecy that had surrounded the art lessened. သို့သော်, some changes were made to kata for the purpose of teaching children and giving public demonstrations, and it is said this contributed to the loss of some knowledge concerning kata bunkai (applications) and thus the hiding of some of karate’s deadliest defences. Shuri-te karate master Anko Itosu (1830-1915) pioneered this development and, though not alone, his student Funakoshi Gichin is the Okinawan most often credited with the establishment of karate in Japan. In the early ’20s, Funakoshi impressed Japan’s Crown Prince withakarate demonstration and his art was later given support by Judo’s famous founder, Jigaro Kano, securing karate’s acceptance by the Japanese. Many Japanese held racist attitudes toward things Chinese or Okinawan, so these events were vital for Karate’s growth. The Okinawan’s originally called Kara?te tou-di, meaning China-hand. ‘Hand’ isaliteral translation of te or di, which was used to describe Okinawa’s fighting arts just as the Chinese used the word for fist. To help karate blend into Japanese culture, the character tou was changed toaJapanese one meaning empty, hence we now have kara-te-do, ‘the way of the empty hand’. ထိုအရပ်မှ, Kenwa Mabuni founded Shito-Ryu (1928), and Chojun Miyagi established Goju-Ryu (1930). Funakoshi founded Shotokan in 1938 and Hironori Otsuka blended jiu-jitsu with karate (learned from Funakoshi) to form Wado-Ryu in 1939. Universities in Tokyo and Osaka formed karate clubs and the art of Okinawan China-hand soon became Japanese. The Butokukai, Japan’s top combat-arts organisation, also helped Japanise karate, creating standards for teaching and developing ways to competitively test the arts. These were the beginnings of sport-karate. The various Okinawan karate schools had always been scattered and disorganised, divided into closely guarded regional and family groups (much like the arts of China). Many styles existed but the primary three schools were all concentrated inasmall area of southern Okinawa and named after their towns of origin: Naha,atown of merchants, Shuri, home to royalty, and Tomari, inhabited by farmers and fishermen. Variation between the styles is partly attributed to the distinct influences of these different classes of society. Shuri-te featured long, low stances and an offensive approach, considered derivative of Shaolin Temple kung fu, while Naha-te is considered the most Chinese, incorporating hard and soft methods, breathing techniques and ki, (Chi or vital energy) control. Tomari-te (which focused on using the arms) developed from these two and together they were the basis for the Japanese styles; Naha-te became Goju-Ryu and Shorin-Ryu isaproduct of both Naha-te and Shuri-te. From the Goju and Shorin schools emerged Shito-Ryu, နောက် ... ပြီးတော့. The facts concerning Okinawa’s sources of martial arts influence are often vague and unverifiable, some say because WWII bombs have destroyed much of the evidence. နေတုန်းပဲ, aside from the continual development of self-defence methods among Okinawans, it is accepted that Chinese martial arts have most greatly influenced present-day karate. တကယ်တော့, Chojun Miyagi saidastyle of kung fu that arrived in 1828 was “the source” of Goju-Ryu. This passage of combat knowledge from China is closely linked toabook of Chinese origin called the Bubishi, the subject of Kyoshi Patrick McCarthy’s book, The Bible of Karate. Published sometime during China’s Qing dynasty (1644-1911), it details Chinese kung fu history, technique and philosophy. It’s believed the Bubishi was written byaWhite Crane boxer, Fang Qiniang, the daughter of an Eighteen Monk Fist kung fu stylist who escaped the destruction of the Shaolin Temple by government forces (Shaolin was known to house and train revolutionaries) and settled in Fujian, တရုတ်. Both feature in the Bubishi, as do their systems. This book was kept secret and hand-copied by generations of Okinawan masters; Funakoshi’s books even contain chapters taken directly from the Bubishi. McCarthy’s extensive research exposed 10 more-or-less plausible theories as to who brought the Bubishi to Okinawa. Featured among them are some Okinawan masters who trained in China, including Uechi-Ryu founder Uechi Kanbun, who studied Shaolin Tiger kung fu in Fuzhou around 1897. သို့တိုင်, while the Bubishi is of great importance to Okinawan karate, it did not arrive in Okinawa until sometime in the 1800s and was preceded by many more influential exchanges. Common folklore tells of karate’s development by downtrodden peasants, their weapons confiscated by Japanese invaders, who developed secret fighting traditions while their rulers slept. Legend has it that this is why karate gis look like pyjamas: because they once were, and the tradition has carried on. သို့သော်, these romantic origins are considered unrealistic by most historians, as Okinawan combative traditions go back much further. ထဲမှာ 800 years between 600 နှင့် 1400 A.D., Okinawa experienced territorial fighting under the rule of warrior-chieftans and in the 10th century military power struggles in Japan saw some warrior clans move to Okinawa. မှ 794 ရန် 1185, Japan’s methods of war were introduced, including grappling, swordsmanship and other weapon-arts. Okinawa’s regional warring continued until 1429, when the rival groups came under one rule as the Ryukyu Kingdom. In 1507, feudalism (a system whereby peasants farmed forawealthy lord and fought in his army) was abolished and private ownership of weapons was outlawed. ဒါ, says Kyoshi McCarthy, “explains why the Uchinanchu [Okinawans] began intensively cultivating an unarmed means of self-defence”. ဒီတော့, long before karate was exported from Okinawa to Japan, the Japanese were bringing their own combative arts to Okinawa. သို့သော်, Chinese kung fu’s influence was more recent and is more evident in the Okinawan karate that exists today. နောက်တဖန်, there are many theories explaining how it got there. Okinawa established trade with China during the Ming Dynasty and by 1393,agroup of Chinese referred to as the 36 Families was settled in Naha, Okinawa. အဲဒီမှာ, Okinawans were taught Chinese language, culture and, it is assumed, ကိုယ်ခံပညာ. ဒီကာလအတွင်း, Okinawan students also travelled to China to study and possibly learn martial arts. Another likely source are the sapposhi (representatives of the Chinese Emperor) who, in the 1400s, came to Okinawa for months atatime with many multi-skilled people in tow, including security experts. The Chinese kung fu that arrived in Okinawa, possibly by one or all of these means, was then used to police the island. ပြီးနောက် 1509, with even government officials barred from carrying weapons, these civil-defence methods went underground, but were secretly practised and developed by the middle-level samurai class known as pechin, whose responsibilities included law-enforcement. In 1609 Japan’s Satsuma clan captured the Ryukyu Kingdom and until Okinawa became part of Japan in 1879, eclectic fighting traditions grew. Due to the weapon bans, kobudo evolved through Okinawans making use of domestic and farming implements instead, of which the sai is an example (it is said to have once beenahay-fork). Some pechin also visited Satsuma and learned the Jigen-Ryu ken-jitsu of the Satsuma samurai; it is thought that the six-foot staff techniques of Okinawan kobudo originated there. One example is Matsumura Sokon, an important figure in Shuri-te who wasasecurity agent for various Ryukyuan kings and studied martial arts in Satsuma and Fujian, တရုတ်. But to fully explore the origins of China-hand, one must look to China. Most brief histories of karate begin with the legend of the Indian monk Daruma (in Japanese) or Bodhidharma, generally described asaskilled martial artist born intoawarrior caste. He travelled to China around the Sixth Century AD to spread Zen Buddhism, settling at the Shaolin monastery to teach Buddhist meditation and philosophy, and physical movements that included striking – the alleged beginnings of the kung fu systems mentioned so far. သို့သော်, there is evidence of strong warrior traditions existing in China long before the arrival of Daruma (the first emperor to unify China, Qin Shi Huang, ဥပမာ, left terracotta replicas of his entire army in Xi’an in 210 ဘီစီ). It could also be logically concluded that fighting methods and traditions existed to an extent in all human societies, just as surely as quarrels and aggression existed. Texts discovered in China, reportedly 4,000 နှစ်ပေါင်းများစွာ, detail systematic physical training, while 2,800 year-old writings describing unarmed combat have also been found in Europe. That aside, the previously mentioned systems of Monk Fist and White Crane kung fu can be traced to Shaolin. While it is uncertain how much of Daruma’s story is true, the legend is strong and there is little doubt that the texts and exercises introduced to Shaolin have been influential there. သို့သော်, there have since been many other developments in the kung fu of Shaolin, with various influences flowing into and out from the Temples, leading to the creation of many different styles. Keeping in mind that traditions are ever-changing, the predecessors of Shaolin martial arts are not necessarily the true origin of karate, just as one person inagame of Chinese whispers has onlyasmall influence on what is whispered at the end of the line. Due to Okinawa’s location (just 740 kilometres east of China and 550 north of Taiwan) it attracted the attention of pilgrims, traders and pirates of many races and has therefore had centuries of cultural exchange with Korea, လာအို, Cambodia and numerous other Asian cultures with martial traditions. Some karate historians even say that the need for Okinawa’s sailors to protect themselves against pirates playedapart in the development of Okinawan te, which has existed in various forms for at least 1,000 နှစ်ပေါင်း. Despite the focus of Japanese martial traditions on weaponry and grappling during the periods that Okinawa was most exposed to them, their influence on Okinawan karate and kobudo should not be discounted either. ဒီတော့, to provideacomplete history of today’s karate, it would be wise to also include the history of all Japanese martial arts. That, သို့သော်, would be another story entirely! A good analogy for the history of karate might be that no child is born of only one parent; they will therefore have four grandparents, eight great-grandparents, နောက် ... ပြီးတော့. It can be said that all karate systems in existence today are the descendants of many different parents, each with unique genes but also similarities, evidence of shared ancestors somewhere in their lineage. That said, it is well worth digging around for the many great individual stories that make up the history of karate. Some of us might also benefit from researchingahistory that is more personal, immediate and accessible: what of your teacher, his life and his art? Who has he trained with, in what systems? How has karate affected him, and he it? And what of his teacher? Although the past is often more wondrous than any prediction of the future, historians uncover it not only out of curiosity; their common aim, it is often said, is to learn about the present from the events of history. ဒီတော့, by uncovering your instructors’ karate history, you should learn much that will help you on your own journey. You may also choose to learn from the history presented in this article and write it down carefully for future generations. ကရာတေး၏သမိုင်း
An outdoor recreational activity, camping involves people spending the night in tents atacampsite. They do it in an attempt to temporarily avoid the din and bustle of city life, and to get close to nature. If you are looking to spendacomfortable time in camping, you can opt for the recreational vehicles. The recreational vehicles are luxurious and have all types of modern facilities like air conditioning, bathrooms, kitchens, showers, satellite TV and internet connection. Some feel that the real experience of outdoor camping comes from tent camping. Various touring bicycles, boats, and bush planes are used. For camping, you need to carry with you some basic camping equipment. Tent, sleeping bag, portable stove, လက်နှိပ်ဓာတ်မီး, axe for cutting wood, andarope. A tent consists of sheets of fabric that are attached to different poles to produceashelter. Tents can be of different types like the flysheet, gazebo, fishermens tent, orabeach tent. Sleeping bags are warm and well insulated. They provide protection from wind, perspiration and exposure to view. A portable stove isalightweight stove used for camping. They are usually single burner stoves using solid or liquid fuel for ignition. A flashlight is useful in the dark to illuminate the surrounding. It is important to plan your camping well in advance. Always expect the unexpected. Consider the worst possible cases that you may have to face and think of ways how you can deal with the problem. Send copies of your route to your family members. Register yourself before going out forahike and similarly sign in after coming back. Useatwo-way radio to communicate with your partner. Always be prepared to face weather change while you are camping. Make sure that you are carrying the necessary camping gears like waterproof backpacks, တဲများ, အိပ်အိတ်, and other such things. Carryawaterproof jacket and pants with you. Carry layer clothes so that you can remove or addalayer according to the weather condition. Carry along with youatopographical map of the area so that you dont easily get lost while camping. A whistle may come handy. Beware of insect bites and stings. Always useaDEET-based insect repellent and check for bites behind your ears, under the arm, and in the groin area. Camping provides the best way of engaging in adventures and getting close to Nature. စခန်းချ? Requirements And Safety Measures
လူတွေကမြင်းတွေကိုလောင်းတာကံမကောင်းတာပဲလို့ထင်ကြတယ်, ထိုသို့လုပ်နေစဉ်တွင်ငွေရှာရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်ဖြစ်သည်. အတွင်းပိုင်းသတင်းအချက်အလက်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ, လူများသည်မတူညီသောမြင်းတစ်ကောင်မှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဖျားနာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသောပြင်ဆင်မှုများသို့မဟုတ်အခြားအသိပညာအချို့ကိုရည်ညွှန်းသည်. ဒါကတစ်ချိန်ကမှန်ခဲ့ပေလိမ့်မည်, သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်လောင်းကစားခြင်းကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးနေ့စဉ်စစ်ဆေးသည်, မရှိသလောက်အရာ၏ဤမျိုး (ဘယ်တော့မှမ) ဖြစ်ပေါ်သည်. ဒါဆိုဘာလဲ? သငျသညျနားမလည်နိုင်လောက်အောင် hunches နှင့်အညီလောင်းကစားခြင်းနှင့်ရိုးရိုးအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ပါတယ်သငျ့သညျ? ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. သင်၏အလောင်းအစားများအားမတူညီသောမြင်းများအကြောင်းသင်စုဆောင်းပြီးတွက်ချက်ထားသည့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံထားပါ. ငါဒီမှာစာရင်းပြုစုကြပြီ 8 ရွှေစည်းမျဉ်းများသင်လောင်းမည့်ပြိုင်ပွဲတွင်မြင်းတစ်ကောင်မည်မျှကောင်းမွန်စွာစီရင်နိုင်မည်ကိုအကဲဖြတ်သည့်အခါသင်သတိပြုသင့်သည်. 1. ရာသီဥတုထွက်စစ်ဆေးပါ, ထို့နောက်ပြိုင်ပွဲရှိမြင်းများမည်သို့အခြေအနေရှိသနည်းကိုစစ်ဆေးပါ. အချို့သောမြင်းများသည်အခြားသူများထက်မိုးရွာလျှင် ပို၍ များတတ်သည်, အခြားသူများကမိုးအုံ့ရက်တွင် finish ကိုမှမတားဆီးအားသွင်းနေစဉ်. အဘယ်ကြောင့်? ကျွန်တော်မသိပါ, ဒါပေမယ့်အဘယ်အရာကိုအရေးကြီးပါတယ်ရဲ့၎င်း၏စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်. 2. ရာသီနီးလာသည်နှင့်အမျှအသက်ကြီးသည့်မြင်းများသည်သုံးနှစ်သားများထက် ပို၍ နှေးသည်ဟုမထင်ပါနှင့်. ဒါမမှန်ပါဘူး. သင်စစ်ဆေးရမည့်အချက်မှာမြင်းတစ်ကောင်ချင်းစီပြေးပြိုင်ပွဲမည်မျှပြေးကြောင်းဖြစ်သည်. တခါတရံမြင်းများသည်များသောအားဖြင့်ပြိုင်ဆိုင်ကြရပြီး၊, ဒါပေမယ့်ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး. 3. အံ့သြစရာ, သင်ကဂျော်ကီ၏အလေးချိန်နှင့်မြင်းသည်မည်မျှလျင်မြန်စွာပြေးနိုင်မည်ဆိုသည့်တိုက်ရိုက်အချိုးရှိသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့ဒါမမှန်ဘူး. jockeys အများစုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတူတူပင်အလေးချိန်ကတည်းက, အနိုင်ရဖို့စီမံသူက၎င်း၏အမှန်တကယ်အတော်လေးလေးလံသူမြား. 4. အလားတူပင်, ပိုမိုလေးသောမြင်းများသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောပြေးလမ်းများထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာပြေးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်တစ် ဦး ပွိုင့်အထိ. မြည်းတစ်ကောင်သည်ပေါင်တစ်ရာကျော်အလေးချိန်ရှိသည့်အတွက်၎င်းသည်အကွာအဝေးများသောပြိုင်ပွဲများတွင်အနိုင်ရလိမ့်မည်. 5. မြင်းတစ်ကောင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အသစ်စက်စက်ရှိတာကြောင့်မြင်းဟာမြန်မြန်ပြေးလိမ့်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး. ငါဒီအရူးအသံငါသိ၏, ဒါပေမယ့်ငါမြင်းရထားမှာငါတွေ့ဆုံခဲ့မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကငါ့ကိုဤအကြံပေးချက်ကိုအပိုင်းအစကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, စိတ်နာကျင်မှုကိုသက်သာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဆီကနေလွတ်မြောက်အောင်ငါကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်. 6. မြင်းများ၏မျိုးနွယ်ကိုစစ်ဆေးပါ. သင်တွေ့သမျှအချက်အလက်များကိုသိမ်းထားရန်သတိရပါ. အချို့သောမြင်းများပေါ်ရှိစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုသင်၏ဒေသခံစာအုပ်ဆိုင်များ၌ပင်သင်ဝယ်နိုင်သည်. သငျသညျသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစုဆောင်းပြီးနောက် colt အလွန်မြန်ဆန်စွာ run ဖို့ filly အဖြစ်အများအပြား pedigree မလိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ. 7. အောက်ခြေလူတန်းစားမျိုးနွယ်မှမျိုးရိုးအပေါ်အလွန်အမင်းအားကိုးမနေပါနှင့်. ဤသည်နေရာတွင်အားနည်းသောမျိုးရိုးရှိသည့်မြင်းများသည်တောက်ပလေ့ရှိသည်. 8. မိန်းမပျိုများသည်မိန်းကလေးများအတွက်နာမည်ကောင်းတစ်ခုစတင်လာကြသည်, သူတို့ပြိုင်ပွဲတဲ့အခါမှာဒါသူတို့ကိုလျှော့တွက်မထားပါနဲ့. မကြာသေးမီက, သူတို့ကောင်းကောင်းအနိုင်ရပါပြီ. အထက်ပါကိုသုံးပါ 8 နောက်တစ်ကြိမ်သင်သွားသည့်လမ်းကြောင်းသို့သွားလျှင်သို့မဟုတ်သင်၏လောင်းကစားကိုလောင်းရန်အတွက်အွန်လိုင်းအားကစားစာအုပ်ထဲသို့ဝင်သောအခါရွှေမြင်းများပေါ်တွင်လောင်းကစားခြင်းဥပဒေသ. 8 မြင်းများလောင်းခြင်းအတွက်ရွှေစည်းကမ်းများ
Fly fishing is absolutely never complete withoutafly fishing rod. A rod has several specifications and parts as well so before you decide on takingasplash for the fish you just can’t wait to get your hook in to, be sure you have an idea what your rod is really made of. ပထမ, although fly rods have different shapes and sizes; some are longer, heavier or more colorful than the others, the different parts ofarod doesn’t change at all. The important part of the rod is referred to the rod blank. It is the central shaft of the rod and it’s where everything, where the rest of the rod is attached. Rod blanks is also called the tip and then the heavy section is called the butt. ယေဘူယျအားဖြင့်, blanks are made of graphite but there are still other materials that can be used. Next is the reel seat. This is located at the butt of the rod. The purpose of this is for the fly reel; the rings found on this part are meant to lock the reel and the foot in place. The material used for reel seats can be either graphite or metal. Then we have the rod handle. This is located just right above the reel seat. This part of the rod also varies in different sizes and shapes. You can find different materials for this one. For more expensive rods, the usual material used on this part is made of rubber. But for the usual cases, (rods that are less expensive) cork is the more common material. နှင့်နောက်ဆုံး, the rod guides. These are attached to the rod blank. The purpose is to ‘guide’ the fly line through them. ထုံးစံအတိုင်း, this part of the fly fishing rod varies in shapes too. You’ll also notice that the first guide is identical to the ones found on conventional fishing rods. What they are referred to as well is stripping guides. For the rest of the rod, the wire used is thin and it’s usually addressed as snake guides. The last guide found at the tip of the rod is called the tip top. Parts Of A Fly Fishing Rod
ကာစီနိုအပိုဆုအပေါ် crash သင်တန်း
အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများသည်မကြာသေးမီကအွန်လိုင်းကမ္ဘာကိုရေလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်. အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်သူတို့၏ကံကြမ္မာကိုကြိုးစားသူများများကိုဆွဲဆောင်ရန်အလွန်ကြိုးစားခဲ့ပုံရသည်. သူတို့ကအလားအလာရှိတဲ့ကစားသမားရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းမိဖို့ကွဲပြားခြားနားသောကမ်းလှမ်းမှု၏စဉ်းစားရန်ကြိုးစားနေခဲ့ကြပြီ. ထိုသို့သောပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုမှာလူများအားသူတို့၏အွန်လိုင်းကာစီနိုတွင်ကစားရန်ကစားခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ဆုကြေးငွေများကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်. လောင်းကစားရုံအပိုဆုကြေးများကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံများမှပေးသောကမ်းလှမ်းချက်များကိုလောင်းကစားရုံများစွာတွင်လောင်းကစားလုပ်ခြင်းဖြင့်ကစားသမားတစ် ဦး အားလောင်းကစားငွေကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။. ကွဲပြားသောအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအတွက်ပမာဏကွဲပြားနိုင်သည်. တချို့ကထုတ်ပေးလိမ့်မည် 25 ရန် 50 အနည်းဆုံးလောင်းကြေးအတွက်ဒေါ်လာအပိုဆုကြေး. အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအချို့လည်းပေးနိုင်သည် 100 ကစားသမားပြုလုပ်သည့်အပ်ငွေတိုင်းအတွက်ရာခိုင်နှုန်းပွဲစဉ်ဆုကြေးဖြစ်သည်. ဆိုလိုသည်မှာကစားသမားသည်သွင်းထားလျှင်ဆိုလိုသည် $100 သူ၏အကောင့်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံသည်ထိုပမာဏနှင့်အပြည့်အ ၀ ကိုက်ညီလိမ့်မည်, ကစားသမားဆည်းပူးအောင် $200 သူ၏အကောင့်ပေါ်တွင်ကန ဦး လောင်းကစားငွေ. အချည်းနှီးဘေးမှအပိုဆုကမ်းလှမ်းသည်အခြားလောင်းကစားရုံလည်းရှိပါတယ်, လူတွေကအွန်လိုင်းမှာကစားရတာအရသာရှိတာနဲ့နောက်မှထပ်ပြီးကစားနိုင်အောင်လုပ်ထားတာ. သင်ဤသည်သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်လွယ်ကူသောငွေဖြစ်သည်ဟုထင်လိမ့်မယ်, သင်၏ရရှိသောငွေများကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင်လိုက်နာရမည့်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိပါသည်. အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများသည်ထိုလိုအပ်ချက်များကို၎င်းတို့၏ကမ်းလှမ်းမှုအလွဲသုံးစားပြုသူများအတွက်အကာအကွယ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်. ပုံမှန်လိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာကစားသမားသည်အနည်းဆုံးလောင်းသင့်သည် 25 ငွေမသွင်းခင်အပ်ငွေနှင့်အပိုဆုပမာဏကိုအကြိမ်အရေအတွက်. Baccarat ကဲ့သို့သောဂိမ်းအချို့ရှိပါသည်, ကျောက်စိမ်း, လိုအပ်သောလောင်းကြေးပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရေတွက်မထားဘူးသော roulette နှင့် Blackjack ပင်. လောင်းကစားရုံအပိုဆုများသည်ကစားသမားများကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားများတွင်စတင်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်. လောင်းကြေးငွေပိုမိုပေးမည့်ကမ်းလှမ်းသောအပိုငွေကိုသူတို့လိုချင်ပုံရသည်. ၎င်းသည်လူအများအားပုံမှန်အွန်လိုင်းကစားသမားများဖြစ်လာစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအတွက်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်. ကာစီနိုအပိုဆုများ ၀ ယ်ယူနိုင်ရန်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုအသုံးချသူအချို့လည်းရှိသည်. ဒီကစားသမားများ, မဟုတ်ရင် 'ဆုကြေးငွေမုဆိုး' 'အဖြစ်လူသိများ, လောင်းကစားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးပြီးသည်နှင့်လောင်းပြီးလျှင်လောင်းကစားရုံအပိုဆုကြေးများကိုအပြည့်အဝအခွင့်ကောင်းယူပါ. ကစားသမားကိုကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါမဖြစ်စေမ, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံများကဤလုပ်ဆောင်မှုများကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကစားသမားများအပန်းဖြေရန်အတွက်သာသာကစားနိုင်ခြင်းမှာသူတို့၏အခြေအနေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။. အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများသည်အပိုဆုကြေးရှာသူများအတွက်အမြဲတမ်းစောင့်မျှော်နေပါသည်. ဖမ်းမိတဲ့အခါ, သူတို့ရဲ့မြှင့်တင်ရေးအခွင့်ထူးများသောအားဖြင့်ရုပ်သိမ်းနေကြသည်. အကယ်၍ သင်သည်ဆုကြေးမုဆိုးအဖြစ်တံဆိပ်တပ်ခံရပြီးသင်၏အွန်လိုင်းအခွင့်အရေးများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုခြင်းမရှိပါက, သင်ရှောင်ရှားသင့်သောအရာအချို့ရှိပါသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, အွန်လိုင်းကာစီနိုတွင်ကစားသောအခါအကောင့်မျိုးစုံကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်. လောင်းကစားရုံ၏လောင်းကစားလိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းမီသင်၏အနိုင်ရရှိမှုကိုငွေမထုတ်ယူပါနှင့်. ပုံမှန်အားဖြင့်လောင်းကစားလုပ်ရန်လည်းကြိုးစားသင့်သည်. လောင်းကြေးငွေများရုတ်တရက်တိုးလာခြင်းကလောင်းကစားရုံသည်သင့်အားအလံနီကိုပစ်စေနိုင်သည်. နှင့်နောက်ဆုံးပေမယ့်အနည်းဆုံး, သင့်အနေဖြင့်သင့်လျော်သောချေးငွေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးပြီးသင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်တွင်မမှန်မကန်မှုများရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ. မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ကကာစီနိုလောင်းကစားရုံများမှသင့်အားသူတို့၏ site ပေါ်တွင်ကစားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ပြီးသင့်အားလောင်းကစားအပိုဆုများပေးအပ်ခြင်းကိုသင့်အားငြင်းပယ်နိုင်သည်။. ကာစီနိုအပိုဆုအပေါ် crash သင်တန်း
ဤတွင်နွေ ဦး ရာသီရောက်သည်ဟူသောအချက်သည်အနည်းငယ်သောအရာများကိုဆိုလိုသည်. နွေ ဦး ရာသီဆိုသည်မှာဆောင်းရာသီ၏အေးခဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားထပ်မံဖြတ်သန်းသွားပြီဟုဆိုလိုသည်. နွေ ဦး ဆိုသည်မှာစာသင်နှစ်သည်အလွန်နိမ့်ကျသွားပြီးမကြာမီကလေးငယ်များပြန်လွတ်လာနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်. နွေ ဦး လည်းနွေရာသီ၏အံ့သြဖွယ်ရာသီရဲ့လမ်းမကြာမီရဲ့အပေါ်ဆိုလိုသည်. နွေရာသီကိုငါနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကနွေးထွေးတဲ့ရာသီဥတုကိုဆိုလိုတယ်, ရာသီဥတုအကောင်းဆုံး, ရောက်ရှိတော့မည်. ပူနွေးသောရာသီဥတုသည်အလားအလာများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်. နွေးထွေးသောရာသီဥတုသည်ရာသီဥတုအခြေအနေအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းလူအများသိသာထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ပြီးအရာများစွာကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအရာရာများစွာကိုပျော်မွေ့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. ပူနွေးသောရာသီဥတုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာမှာငါအဆုံးတွင်နာရီပေါင်းများစွာသက်တောင့်သက်သာရှိနိုင်သည်. ငါအိမ်ပြင်မတ်ေတာပါကောင်လေးမျိုးပေါ့, ဒီတော့အေးတဲ့ဆောင်းရာသီကကျွန်မအတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြုံခဲ့ရတယ်. နွေရာသီမှာမင်းဟာနံနက်စောစောညနေနှောင်းပိုင်းအထိအပြင်ဘက်မှာရှိနေနိုင်ပြီးဘယ်တော့မှအေးဆေးမခံစားရဘူးဆိုတာကိုငါနှစ်သက်တယ်. သင်၏မျက်နှာနှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌နွေးထွေးသောနေရောင်သည်ကမ္ဘာပေါ်၌ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးခံစားချက်ဖြစ်နိုင်သည်. ပူနွေးသောရာသီဥတုသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လူများအားပိုမိုတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးပိုမိုကျန်းမာသောနေထိုင်မှုပုံစံကိုရရှိစေသည်. ဆောင်းရာသီမှာလူတွေအားလုံးလုပ်ချင်တာကမီးရှေ့မှာထော့နေတယ်, စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကိုဖတ်။ ရေနွေးတစ်ခွက်သောက်ပါ. နွေးထွေးသည့်နေ့များ၌လူများစွာသည်စာအုပ်များကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတစ်နာရီချင်းစီလှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်သက်ကြသည်. ကလေးများသည်အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်, အရွယ်ရောက်သူများသည်ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ရန်နှင့်အိမ်အပြင်ဘက်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ကိုနှစ်သက်ကြသည်. ပူနွေးသောရာသီဥတုများဖြစ်ပေါ်စေသောပိုမိုကျန်းမာသောလူနေမှုဘ ၀ အတွက်အလားအလာသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်. နှစ်စဉ်နေ့တိုင်းနွေးထွေးတဲ့ရာသီဥတုရှိစေချင်တယ်. အချိန်ဖြုန်းဖို့ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းများစွာသည်နွေးထွေးသောရာသီဥတုတွင်သာသက်တောင့်သက်သာရှိသည်. စခန်းချ, ဥပမာ, ပူနွေးသောရာသီဥတုအတွက်အများကြီးပိုကောင်းသည်. ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသောကျောပိုးအိတ်ကိုထုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏သားများနှင့်အတူရက်အနည်းငယ်ကြာတောအုပ်သို့ထွက်ခွာခြင်းထက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေကုန်ငါးမျှားရန်သွားလေ့ရှိပြီးမီးဘေးတွင်ထိုင်။ ညဘက်တွင်စကားပြောပါသည်. နွေရာသီရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သားများနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးအမှတ်ရစရာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်. နွေးထွေးတဲ့နွေရာသီမှာကျွန်တော့်ကလေးတွေဘေ့စ်ဘောကစားတာကိုကြည့်ရတာပျော်တယ်. ငါဂိမ်းကိုငါ့သားသမီးရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားပေးအားမြှောက်ဘောလုံးလယ်ကွင်းမှာငါ့ညနေခင်းဖြုန်းကိုချစ်. သင်မြင်တဲ့အတိုင်း, နွေးထွေးသောရာသီဥတုကိုချစ်မြတ်နိုးရန်အဆုံးမဲ့အကြောင်းများရှိသည်. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူငါ့အအချို့ဝေမျှခဲ့ကြသည်. အခု, နွေရာသီချဉ်းကပ်သည်အတိုင်း, နွေးထွေးသည့်ရာသီဥတုကိုသင်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုနှစ်သက်စွာခံစားနိုင်သည်. ပူနွေးသောရာသီဥတုသည်အလားအလာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်
Inflatable Kayak vs Hardshell – ဘယ်ဟာကိုရွေးသင့်တယ်?
သင်ကယပ်လှေဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါတယ် – inflatable နှိုင်းယှဉ် hardshell တစ်ခုဖြစ်သည်. သို့သော် Stearns ကဲ့သို့သောယုံကြည်စိတ်ချရသောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ, သင်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ. သင်ကယပ်လှေဝယ်သေးတာမဟုတ်ဘူး, သင်ဟာ hardshell kayak ကိုကျော်ပြီးတက်နေတဲ့ kayak ရဲ့အားသာချက်များရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်သိသင့်တယ်. ငွေကွေးသိုလှောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပျော်မွေ့. အကယ်၍ သင်သည်အစပြုသူတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဝါသနာပါလျှင်, မင်းငွေချေတဲ့ယင်ကောင်ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်? Stearns သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောငွေဖောင်းပွသောကယပ်လှေများကိုပြုလုပ်ပေးပြီး၎င်းသည်များစွာမကုန်ကျပါ. သငျသညျအများအပြားစတိုင်များထဲကနေရွေးချယ်နိုင်သည်. ထိုအခါသင် Stearns ဖောင်းလှေ kayaks နှင့်အတူသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသင့်လျော်သောတရှာတွေ့လိမ့်မည်. အတော်များများကကျော်ကြားကုမ္ပဏီများသည်ကြီးစွာသောယပ်လှေလုပ်ပါ, ဒါပေမယ့် Stearns ဆိုတာမင်းယုံနိုင်တဲ့နာမည်ပါ. ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်းအတွက်ငွေလှေများကိုဖန်တီးသည်, ယှဉ်ပြိုင်မှုအပြင်၌, အားကစားနှင့်ပိုပြီး. သင်ဘာလုပ်နေလဲ kayaking အမျိုးအစားအရေးမကြီးဘူး, သင် Stearns ကနေအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ငွေလှေ kayak ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သင်ပထမ ဦး ဆုံးမယုံပေလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ဖောင်းပွလှေယိုယပ်ယပ်လှေတွေဟာအတော်ကောင်းတယ်, hardshell ယပ်လှေထက်သာ။ ကောင်း၏လျှင်, နည်းလမ်းများစွာအတွက်. သင့်ရဲ့ယပ်လှေဖောင်းပြီးနောက်ပြီးနောက်, သင်က၎င်း၏ cockpits နှင့်အခန်းတူအရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်. သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများအကြားတွင်သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ကိုက်ညီသောအရာတစ်ခုကိုသင်အလွယ်တကူရှာနိုင်သည်. အားကစားနှင့်တောကန္တာရများတွင်အလွန်ကောင်းသော Stearns လှေလှော်လှေလှော်လှေများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်. ကယက်လှေရောင်းသည့်စတိုးဆိုင်များတွင် Stearns ငွေဖောင်းပွသောကယပ်လှေများရှိသည်. သငျသညျကိုယ်တွေ့သူတို့ကိုကြည့်ရှုသည့်အခါ, သင်ချက်ချင်း hardshell ဖို့ဖောင်း၏များစွာသောတူညီမြင်လိမ့်မည်. ဖောင်းပွလှေများပြားသောတံတားများနှင့်အတူရနိုင်သည်, ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်. နာမည်များစွာကိုရှုပ်ထွေးမသွားပါစေနှင့်. အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည့်အရာကိုရွေးပါ. Stearns ဖောင်းလှေလှေများသည်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤအချက်အလက်သည်သင်အသုံး ၀ င်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်. Inflatable Kayak vs Hardshell – ဘယ်ဟာကိုရွေးသင့်တယ်?
Arnis ရန် Martialarm Intro
Arnis နှင့် Escrima တို့သည် Kali ကဲ့သို့ကိုယ်ခံပညာနှင့်တူညီကြသည်, မတူကွဲပြားသောအမည်များသည်ဖိလစ်ပိုင်၏မည်သည့်အပိုင်းမှအနုပညာမှဆင်းသက်လာခြင်းနှင့်လက်တဆုပ်စာသေးငယ်သည့်နည်းစနစ်ကိုဆိုလိုသည်. Kali သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျောင်းသားများကိုပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်လက်ဖြင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းများကိုသင်ကြားပေးသောကြောင့်ထူးခြားသည်. ထို့ကြောင့် Kali အားပုံမှန်အားဖြင့်တုတ်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုပုံစံအဖြစ်ခံယူသည်, ဒါပေမယ့်လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတန်းတူအလေးပေးပေးထားသည်. လက်နက်မဲ့နည်းစနစ်အများစုသည်ရိုက်နှက်သူများဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ပြိုင်ဘက်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်သို့မဟုတ်ပစ်ရန်ခြေထောက်နှင့်တင်ပါးဆုံရိုးနည်းစနစ်များကိုလည်းအသုံးပြုသည်. စပိန် Espada y Daga ကို Kali သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်, ထို့ကြောင့်များစွာသောကျောင်းများသည်ဓားနှင့်ဓားနည်းများကိုလည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည်. ဆင်တူအမျိုးအစားများ: Kalari Payat – ဤသည်အိန္ဒိယစတိုင် Kali ထက်ဖြည့်စွက်လက်နက်များသင်ပေးတယ်, ဒါပေမယ့်ပွင့်လင်းလက်, ဓား, တုတ်, ထားဘေးသည်အရင်ဆုံး၊. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (ကြေငြာချက်) – မြန်မာနိုင်ငံမှပုံစံ (အခုမြန်မာ) အရာအတွက်ဓါးတိုက်ပွဲတွေအလေးပေးပေမယ့်ကပ်နေသည်, ဓားနှင့်ပွင့်လင်းလက်ကိုလည်းသင်ကြားနေကြသည်. ဖိလစ်ပိုင်ရှိရှေးအကျဆုံးကိုယ်ခံပညာများမှာဌာနေဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများကျင့်သုံးခဲ့သည့်အရာများဖြစ်သည်. သူတို့ကပါးစပ်ဒဏ္legာရီများနှင့်၎င်းတို့၏တိုက်ပွဲများစတိုင်များအကြားတူညီမှုအနေဖြင့်ထင်ရှားသည့်ထိုင်ဝမ်နှင့်ဘော်နီယို၏ဘော်ရီဂျင်နီနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိကြ၏. ဇာတိလူမျိုးများသည်တုတ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်, cudgels, dumog ကဲ့သို့လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပုံစံများကိုလေ့ကျင့်စဉ်ဓားများနှင့်ဓားများ. ဖိလစ်ပိုင်’ စစ်တိုက်ခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်သည့်နည်းဗျူဟာများသည်ရှေးဟောင်းလက်နက်များနှင့်လက်ဖြင့်ပconflictိပက္ခများအထိမဟာဗျူဟာကျကျထိရောက်စွာသက်သေပြခဲ့သည်. အရည်အချင်းမြင့်မားသောဖိလစ်ပိုင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာရှင်များကိုပြည်နယ်တစ်ခု၏လက္ခဏာအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည် “စီးဆင်းမှု” ကြောင်းပြတ်ပြတ်သားသားတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်, ဖြန်, တသမတ်တည်း, ဘက်စုံ, သေစေလောက်, ရှင်သန်, နှင့်ရေရှည်တည်တံ့. Escrima ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်မြို့တွင်မဆိုသင်ကြားနိုင်သည်။ Escrima ၏ကိုယ်ခံပညာလမ်းညွှန်ကိုကြည့်။ သင့်အနီးရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။! Arnis ရန် Martialarm Intro
ဂျက်ကီချန်းမီ, ဂျက်လီ, Steven Seagal နှင့် Jean-Claude Van Damme တို့ဖြစ်သည်, Bruce Lee ရှိတယ်. တစ်လမ်းအတွက်, သူသည်အချိန်ကာလ၏အကြီးမြတ်ဆုံးကိုယ်ခံပညာလှုပ်ရှားမှုသူရဲကောင်းဖြစ်သောကြောင့်ယနေ့ခေတ်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ပရိသတ်များသည် Bruce Lee နှင့်တစ်ခါမျှထိတွေ့ဖူးခြင်းမရှိခြင်းမှာတကယ့်ကိုရှက်စရာပင်။. ရုပ်ရှင်အပေါ်သူ၏ကိုယ်ခံပညာအနုပညာဂျက်ကီချန်းသို့မဟုတ်ဂျက်လီရဲ့ပြောသကဲ့သို့ဖန်စီဖြစ်ရကြမည်မဟုတ်ပေမယ့်သူကမျက်နှာပြင်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်အပေါ်မတူညီတဲ့ဖြစ်ကြသည်. ပို။ ပင်အရေးကြီးသည်ဘရုစ်လီ၏ယနေ့ကျော်လွန်နေဆဲရှိခဲ့သည့်ကိုယ်ခံပညာအပေါ်သက်ရောက်မှုဖြစ်သည် 30 သူကွယ်လွန်ကတည်းကနှစ်ပေါင်း. Bruce Lee ကသူ့ကိုယ်သူကိုယ်ခံပညာရှင်အဖြစ်ပထမ ဦး ဆုံး၊. တစ် ဦး ကိုယ်ခံပညာအနုပညာရှင်အဖြစ်, သူဟာ Jeet Kune do လို့ခေါ်တဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခံပညာစတိုင်ကိုတီထွင်ဖို့သူ့အချိန်ကိုရှေ့ကိုရောက်နေခဲ့တယ်. သူသည်ရိုးရာနှင့်ဂန္ထဝင်နည်းစနစ်များမှဝေးကွာသွားသောကြောင့်ကိုယ်ခံပညာသည်အမျိုးမျိုးသောတိုက်ခိုက်ရေးစည်းမျဉ်းများမှလက်တွေ့ကျသောနည်းစနစ်များကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်. သူ၏ကိုယ်ခံပညာစွမ်းရည်များသည်အခြားသောထင်ရှားကျော်ကြားသောကိုယ်ခံပညာရှင် Jhoon Rhee ၏အစစ်အမှန်နှင့်လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့သည်, Chuck Norris, Ed ကက Parker နှင့်ဂျိုး Lewis က. သူ့နာမည်ကိုနာမည်ကျော်ကြားသော Black Belt Hall of Fame သို့နှစ်ကြိမ်ခေါ်ခဲ့သည်, သူသေဆုံးပြီးနောက်သူသည်အသက်ရှင်စဉ်နှင့်အခြားတစ်ချိန်က. ဤရွေ့ကားအခြားကိုယ်ခံပညာအနုပညာလှုပ်ရှားမှုသူရဲကောင်းအစဉ်အဆက်နီးစပ်လာတော်မူကြောင်းကိုဂုဏ်ပြုဖြစ်ကြသည်. Bruce Lee ကြောင့်မြောက်အမေရိကရှိကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာကျောင်းများသည်ကျောင်းအပ်မှုအလွန်များပြားခဲ့သည်. Green Hornet ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ပါဝင်သော Kato နှင့် Marlowe ရုပ်ရှင်တွင်အနည်းငယ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်စဉ်မြောက်အမေရိကသည် Bruce Lee အကြောင်းအစောပိုင်းတစေ့တစောင်းသိခဲ့ရသည်။. သူကဟောင်ကောင်ကိုသွားပြီး Fists of Fury လိုရုပ်ရှင်အနည်းငယ်ရိုက်တယ် (အာရှဈေးကွက်မှာ Big Boss လို့ခေါ်တယ်) နှင့်အာရှမှသူ့ကိုကြီးမားသောကြယ်ပွင့်ဖြစ်စေခဲ့သည့်တရုတ်ဆက်သွယ်မှု. ဘရုစ်လီလည်းရေးသားခဲ့သည်, The Way of the Dragon ဟုခေါ်သည့်သူ့ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွင်ရိုက်ကူးထားသောသရုပ်ဆောင်နှင့်သရုပ်ဆောင်ထားသောအစဉ်အဆက်တွင်အကောင်းဆုံးကိုယ်ခံပညာပြိုင်ပွဲများကိုရိုက်ကူးထားသောမြင်ကွင်းတစ်ခု။. ဤသည်မြင်ကွင်းသည် Roman Coliseum တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Norris အားသူ၏ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကိုစတင်စေခဲ့သော Chuck Norris နှင့်အတူဖြစ်သည်. နဂါးထဲဝင်ရင်သူ့ကိုမြောက်အမေရိကကိုချိုးဖဲ့လိုက်တယ်. ကံမကောင်းစွာပဲ, သူဟာအသက်အရွယ်မှာဝမ်းနည်းဖွယ်ရာသေဆုံးသွားပါတယ် 32 in 1973 သူသည်ထိုရုပ်ရှင်၏အောင်မြင်မှုကိုမျက်မြင်တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမပြုမီ. Lee ၏သေသောအချိန်တွင်, သူသည်ဘတ်စကတ်ဘောကြယ်ပွင့် Kareem Abdul-Jabar ပါသည့်အခြားဇာတ်ကားအတွက်ရန်ပွဲမြင်ကွင်းများကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်, သူသည်မိမိအကိုယ်ခံပညာကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်. Bruce Lee ၏အခြားကျောင်းသားများတွင်သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သော Steve McQueen နှင့် James Coburn တို့ပါဝင်သည်. Game of Death ကိုနောက်ပိုင်းတွင်အသွင်အပြင်တူသရုပ်ဆောင်များနှင့်အပြီးသတ်ခဲ့သည်. Bruce Lee မှအထင်ရှားဆုံးသောပံ့ပိုးမှုတစ်ခုမှာသူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းမှအခြားအာရှသားများအတွက်တံခါးဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်. သူသည်မြောက်အမေရိကဖျော်ဖြေရေးမြင်ကွင်းတွင်အောင်မြင်မှုရခဲ့သည့်ပထမဆုံးအာရှသားဖြစ်သည်. သူသည်မြောက်အမေရိကနှင့်ကမ္ဘာတစ်ခွင်တွင်ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်များကဲ့သို့သောအာရှသားများအတွက်အတိတ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲသူရဲကောင်းများကစားခြင်းဖြင့်, လူဆိုး, အဝတ်လျှော်လုပ်သားများသို့မဟုတ်အခြား ‘pigtail coolie’ အက္ခရာများ. ပို။ ပင်စကေးတွင်, ဘရုစ်လီသည်အာရှသားများအားပေးခဲ့သည်, ကမ္ဘာတဝှမ်းအထူးသဖြင့်တရုတ်လူမျိုး, ဂုဏ်ယူဖို့အကြောင်းပြချက်. ဘရုစ်လီသည်မည်သည့်နယ်ပယ်၌ပင်ရှိနေပါစေပန်းတိုင်များအောင်မြင်ရန်ရှေ့သို့တွန်းအားပေးရန်သူတို့ကိုယုံကြည်မှုရှိစေရန်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်. ဘရုစ်လီ, အကြီးမြတ်ဆုံးကိုယ်ခံပညာလှုပ်ရှားမှုသူရဲကောင်း
အလွန်ကောင်းမွန်သောလေယာဉ်ပျံမှခုန်ချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ငါ့နောက်မေးခွန်းဖြစ်ခဲ့သည်, အခုဘာလဲ?ဒါနဲ့ငါသုတေသနလုပ်ပြီး skydiving အကြောင်းစဉ်းစားနိုင်သမျှမေးခွန်းတွေမေးခဲ့တယ်, နှင့်အတော်လေးအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်, အားကစား၏သဘောသဘာဝစဉ်းစား. ဒီနေရာမှာငါလေ့လာသင်ယူသောအရာဖြစ်တယ်. ပထမ ဦး ဆုံးအခြေခံ, သင့်ကိုနာမည်ကောင်းရှိတဲ့ skydiving ကျောင်းတစ်ခုရှာဖို့လိုလိမ့်မယ်, ဖုန်းစာအုပ်, နှင့်ပြည်တွင်းလေဆိပ် them.Next ပြည့်ဝ၏, သင်သည်သင်၏အိတ်ကပ်စာအုပ်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ရေငုပ်ခြင်းသည်သင်ယူရန် ပို၍ စျေးကြီးသောအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်, သင်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ လေ့ကျင့်မှုနည်းလမ်း ၃ ခုရှိသည်: တွဲဖက်, တည်ငြိမ်သောလိုင်း, နှင့်အခမဲ့ကျဆုံးခြင်းအရှိန် (AFF).ဤနည်းလမ်းများအားလုံးသည်သူတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အနည်းငယ်အကြာတွင်သူတို့အားပိုမိုထိတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ပထမ ဦး ဆုံး? ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး. ပထမ, ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ သင်မပါဝင်မီအန္တရာယ်များကိုသိထားပါ။ ရေငုပ်ခြင်းသည်စစ်တုရင်မဟုတ်ပါ; သင်ကဂိမ်းဘုတ်ပတ်ပတ်လည်မှာသင့်ရဲ့အပိုင်းပိုင်းရွေ့လျားနေတဲ့မသက်မသာကွန်ကရစ်ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာထိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်လေယာဉ်တစ်စင်းမှထွက်သွား, ရေတံခွန်, အထိအမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိလိမ့်မယ် 250 သောစက္ကန့်လျှင်ပေ 110 တစ်နာရီမိုင်!!သင့်မှာမကောင်းတဲ့ ticker ရှိရင်, စည်းမျဉ်းမြင့်မားသောသွေးဖိအား, သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ, နည်းပြဆရာတစ် ဦး နှင့်စကားပြောပြီးသင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါ။ စိတ်စွဲမှတ်ထားပါ, ဒီအားကစားအတွက်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးတောင်မှတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ to.So ရည်ရွယ်ပြီးတော့အနည်းငယ်ခက်ခဲမြေပြင်ထိမှန်, ဒူးထောက်တာဟာစဉ်းစားစရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးခုန်မချခင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသင့်ရဲ့နည်းပြဆရာနဲ့ဆွေးနွေးဖို့မကြောက်ပါနဲ့။. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုက်ပျိုးဖို့ပြီးတော့မြေကြီးကိုလုံခြုံစွာရိုက်နှက်တာကအမြဲတမ်းပိုကောင်းပါတယ်, သင့်တော်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များဖြင့်သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးကောင်းကင်ပြာရောင်ခြည်ဒဏ်မှပြင်းထန်သောဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။ သင်၏သင်တန်းပို့ချသူများ၏စကားကိုနားထောင်ပါ, သင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာကိုသိပါ, ရုပ်ရှင်မှာမင်းမြင်ခဲ့လို့သာတစ်ခုခုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းဘယ်တော့မှမစဉ်းစားပါနဲ့. ဘယ်လေ့ကျင့်ရေးနည်းစနစ်ကိုသုံးပါ? လေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းများငါသတင်းအချက်အလက်သုတေသနအဖြစ်, လိုင်စင်ရ skydiver ဖြစ်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောနည်းလမ်း ၃ ခုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်, အဆိုပါတွဲဖက်ခုန်, အငြိမ်ခုန်, နှင့်အရှိန်မြှင့်အခမဲ့ကျဆုံးခြင်း (AFF). တွဲဖက်သောတွဲဖက်ခုန်ခြင်းသည်လေထဲကိုရောက်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ 30 မိနစ်များ, ထို့နောက်သင်သည်ကျွမ်းကျင်သောတွဲဖက်နည်းပြတစ် ဦး ၏ရင်ဘတ်၌ချည်ထားစဉ်လေယာဉ်တစ်စင်းမှခုန်ချလိမ့်မည်. ဤရွေ့ကားသုံးခုမှလေးခုနှင့်အတည်ပြုပထမ ဦး ဆုံး Jump ကိုသင်တန်း၏ပြီးစီးပြီးနောက် (မြေပြင်ကျောင်း), ထို့နောက်ကျောင်းသားသည်နောက်အဆင့်သို့တက်နိုင်သည်. တွဲဖက်ခုန်, သို့သော်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောသို့မဟုတ်အခမဲ့ကျဆင်းခြင်းခုန်ချမှုများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်ကိုအခွင့်အရေးပေးသည်။. တွဲဖက်နည်းပြရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှီခိုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ, မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၏အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားရရန်ဖြစ်နိုင်သည်. static လိုင်း static line skydiving ကိုစစ်တပ်ကလေထီးတပ်သားများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လေထီးအားအတော်အတန်နိမ့်သောနေရာတွင်လျင်မြန်စွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။, အကြောင်း 2000 3000 အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်သည်အထူးဒီဇိုင်းကြိုးသည်လေယာဉ်နှင့်သင်၏လေထီးနှင့်တွဲထားသည်. သင်လေယာဉ်ကနေဝေးအဖြစ်, သင်၏ကြိုးသည်သင်၏လေထီးအားချက်ချင်းဖြန့်သည်. အဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာကိုမ must. ဤခုန်ကျော်နှစ်ခုပြီးနောက်ကျောင်းသားသည် Dummy ripcord တစ်ခု၏လှောင်ပြောင်သရော်မှုများကိုစတင်ပြသခဲ့သည်။ ဤခုန်သုံးခုန်ပြီးနောက်ကျောင်းသားသည်ပထမဆုံးလွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။. Accelerated Free Fall ဒီနေရာက adrenalin junky ကိုသွားဖို့နည်းလမ်းပါ. အဘယ်ကြောင့်?သငျသညျခုန်တ ဦး တည်းကနေအခမဲ့ကျဆုံးခြင်းရ!!ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနည်းလမ်းကနည်းနည်းပိုဈေးကြီးတယ်၊ သင်နဲ့အတူသင်ကြားရေးဆရာနှစ် ဦး ရှိလိမ့်မယ်, နှင့်, သငျသညျအခမဲ့ကျဆုံးခြင်း၌ဖြစ်လိမ့်မည်ပေမယ့်, နည်းပြများကအခမဲ့ကျဆုံးခြင်းအတွင်းလက်ဖြင့်အဆက်အသွယ်များကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်, အကြံဥာဏ်များနှင့်လေ့ကျင့်မှုများပိုမိုပေးသောနည်းပြတစ် ဦး တည်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်စတင်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ဤနည်းသည်သင်၏အတန်းအစားအားလိုင်စင်ကိုအနည်းငယ်မြန်စေသည်။. သင်တန်းပြီးဆုံး!!တကယ်ပဲ? သင်ပြီးပါကအတန်းပြီးနောက်4ရန်5မြေပြင်ကျောင်းသင်တန်း၏နာရီနှင့်လုပ်ကြပြီ 25 ခုန်, သင့်အနေဖြင့်လိုင်စင်ရရှိရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီပြီးသင်၏ D လိုင်စင်သို့သွားနိုင်သည်, လိုအပ်သည် 500 သင့်မှာလိုင်စင်ရှိတယ်ဆိုရင်, မင်းတကယ်ပြီးပြီလား?ထိုမေးခွန်း၏အဖြေမှာမည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသနည်း ဟူ၍ ဖြစ်သည်, သငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုသင်ဘယ်သောအခါမျှလေ့လာသင်ယူသည်မဟုတ်ပါ။ နောက်လာမည့်စွမ်းရည်အဆင့်မှာအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ စက်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့်နည်းစနစ်များကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်တီထွင်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ယခုလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာစတင်ရန်ဖြစ်သည်!ပျော်စရာကောင်းပြီးခုန်ကောင်းပြေးပါ! Skydiving အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
သငျသညျငါးဖမ်းအတွက်စစ်မှန်သောစွန့်စားမှုတွေ့ကြုံခံစားလိုလျှင်, ထို့နောက်ကနေဒါသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. ကနေဒါတွင်ကျယ်ပြန့်သောမြစ်ချောင်းများရှိသည်, ကန်, ရေချိုကန်, ဆားငန်ရေနှင့်စီး. ရေချိုနှင့်ရေငန်ငါးဖမ်းခြင်းသည်ကနေဒါနှင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်. ကနေဒါရှိတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအပါအ ၀ င်ငါးများသည်အလွန်ပေါများသည်. ကနေဒါနိုင်ငံသည်သင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုအကျိုးအပြည့်အဝရရှိမည့်ပထမတန်းစားငါးဖမ်းခရီးစဉ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းသည်. သင်စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းမရှိပါ. ကနေဒါတွင်ငါးများပေါများသောစံပြရေရှိသည်. ငါးဖမ်းကိရိယာများနှင့်ငါးဖမ်းရန်ကိရိယာများကိုရောင်းသောဆိုင်များနှင့်စက်ရုံများစွာလည်းရှိသည်. ကနေဒါတွင်ငါးဖမ်းခြင်းကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲထားသည်. ဒါကရေကန်ငါးဖမ်းနှင့်ဆားငန်ငါးဖမ်းခြင်းဖြစ်သည်. အုပ်စုနှစ်စုသည်အထူးသဖြင့်ကနေဒါတွင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်. ကနေဒါတွင်အကျော်ကြားဆုံးငါးဖမ်းခြင်းသည်ငါးမျှားခြင်းဖြစ်သည်, အရာခံစားခြင်းနှင့်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်. ကနေဒါတွင်ပေါကြွယ်ဝသောဆော်လမွန်မျိုးများမှာ Coho ဖြစ်သည်, Sockeye ဆော်လမွန်, Chinook နှင့် chum. ဆော်လမွန်ဟာသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အလှတရားကြောင့်လူသိများတယ်. ကနေဒါရှိငါးဖမ်းလမ်းညွှန်များစွာသည်ဆော်လမွန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိုအထူးပြုကြသည်. ရေငန်ငါးဖမ်းခြင်းတွင်ရေပန်းစားသည်3ကနေဒါ၏ကမ်းရိုးတန်း. သူတို့သည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်သည်, ပစိဖိတ်နှင့်အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ. ၎င်းသည်ငါးမန်းနှင့်တူနာငါးဖမ်းရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ပင်လယ်ငါးကြီးများကိုပင်လယ်နက်များ၌သာဖမ်းမိပြီးငါးဖမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်3ကမ်းရိုးတန်းကမ်းလှမ်း. ကနေဒါကိုလည်းယင်ကောင်ငါးဖမ်းလူသိများသည်. ငါးမျှားခြင်း, အရာအားကစားငါးဖမ်း၏အဟောင်းကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်,aလို့ခေါ်တဲ့အတုဆွဲဆောင်ကိုသုံးပြီးငါးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းမယ် “ယင်ကောင်’ ကနေဒါရှိအပန်းဖြေစခန်းနှင့်အခြေစိုက်စခန်းအတော်များများသည်ယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကြီးသောထုပ်ပိုးမှုများကိုပေးသည်. သင်ကနေဒါတွင်ငါးဖမ်းလိုလျှင်ရေခဲငါးဖမ်းခြင်းသည်သင့်အတွက်လည်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်. သင့်ခရီးစဉ်တွင်သင့်အားအထောက်အကူပြုနိုင်သောရေခဲငါးဖမ်းလမ်းညွှန်များလည်းရှိသည်. သူတို့သည်ကနေဒါ၌သင်၏လုံခြုံမှုနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေသည်. ရေခဲငါးဖမ်းခြင်းသည်အထူးဂီယာလိုအပ်သည်, ကျွမ်းကျင်သောရေခဲငါးဖမ်းခြင်းလမ်းညွှန်၏အကူအညီလိုအပ်သောအဝတ်အစားများနှင့်နည်းစနစ်များ. ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရေခဲငါးဖမ်းရန်လာရောက်သည့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာသည်၎င်းတို့အားလေနှင့်အဝေးသို့နွေးထွေးစေရန်ရေခဲပြင်တဲများကိုငှားနိုင်သည်. ကနေဒါတွင်ရေခဲငါးဖမ်းခြင်းကိုကြုံတွေ့လိုသည့်ခရီးသွားများအတွက်, အမြဲတမ်းသင့်အားငါးဖမ်းခြင်းအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက်အထူးပြုသည့်ငါးဖမ်းလမ်းညွှန်များနှင့်အတူလိုက်ပါရန်အကြံပြုပါသည်. သံလိုက်အိမ်မြှောင်တစ်လုံးယူရန်လည်းအကြံပေးသည်, လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးများကိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာအဖြစ်နှင့်အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက်ဖြစ်သည်. ကနေဒါတွင်ငါးဖမ်းခြင်း
သင့်ကိုယ်ပိုင်မြားပစ်ကိရိယာကိုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်, သင်လက်ျာဘက်ပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ချိန်က. ဒီအတွက်သင်လိုအပ်သည်: 5- ခြေလျင်ဌာနခွဲနှင့်တစ် ဦး 1 ဒါမှမဟုတ်2မြှားအဘို့အခြေခွဲဌာနခွဲ; လျှော်ကြိုး; အမွေးအတောင်; မီးကျောက်သို့မဟုတ်သတ္တု; အကြောင်းကိုသေပြီတုတ် 12 ရန် 18 လက်မ; အမွေးအတောင်; ကတ်ထူပြား; နှင့်ဓား. လေးအတွက်, သစ်သားတုံးကိုရွေးချယ်ပါ, ဖြစ်နိုင်ရင်ကွေးနှင့်အချင်းအနည်းဆုံးလက်မနှင့်5ပေရှည်. ဌာနခွဲ၌ထစ်နှစ်ခုခုတ်ဖြတ်, အကြောင်း 1 1/2 တစ်ခုချင်းစီကိုအဆုံးကနေလက်မ. အဆိုပါထစ်လေးတစ်ဝက်အကြောင်းကိုသွားနှင့်ဌာနခွဲရဲ့သဘာဝကွေးကနေလေးကိုဆန့်ကျင်ဘက်၏ဘေးထွက်အပေါ်ဖြစ်သင့်သည်. သေးငယ်တဲ့အကိုင်းအခက်မြားမြားအဘို့ဖြစ်ကြ၏. ဤအရာများကိုတတ်နိုင်သမျှဖြောင့်အောင်ပြုလုပ်ပါ, လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကို sanding. မြား၏အဆုံးမှာတထစ်ကိုဖြတ်ပါ, ကောင်းတဲ့ချိတ်ဖန်တီး. ဒီနေရာမှာ string ကိုမြှားရဲ့အဆုံးမှာထိုင်လိမ့်မည်နေရာဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့နက်ရှိုင်းသော groove ပါစေ. ထို့နောက်လေးတင်၏လေးပုံသုံးပုံခန့်ကိုသင်၏လျှော်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုဖြတ်ပါ. လေးကသေးသည်. နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ထစ်ပတ်ပတ်လည်တွင်လုံလုံလောက်လောက်ကြီးနိုင်သည့်ကြိုး၏အဆုံးတစ်ခုစီတွင်ချည်ထားသည်. သင်ကြိုးနှင့်ချည်ထားသောကြိုးများကိုယူပြီးချောင်းတစ်ဖက်စီတွင်ရှိသောထစ်များပတ်ပတ်လည်တွင်ချထားပါ. အခုတော့ကတ်ထူပြားစာရွက်များကိုယူ။ ရှည်လျားသောတြိဂံသို့သူတို့ကိုငါဖြတ်. ခြေထောက်များ (အောက်ခြေ) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်သင့်သည် 1.25 လက်မ 1-3/4 လက်မ. သင်အကြောင်းပြီးတာနဲ့6သူတို့ထဲကဖြတ်ခဲ့သည် (အဘို့2မြှား) သူတို့ကိုအကြောင်းကိုကော် .25 မြှား၏အောက်ခြေကနေလက်မ. သူတို့ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အညီအမျှခွဲခြားထားသင့်သည်ကိုသတိရပါ. သူတို့ကမျှတမှုရှိသင့်သည်, တိကျမှန်ကန်မှု, မြှားဖြန့်ချိသောအခါကောင်းတဲ့လည်ပတ်မှု. လေးနှင့်မြားလေးများလုပ်နည်း
လောင်းကစားစတင်ကတည်းက, ပြီးပြည့်စုံသောလောင်းကစားခြင်းစနစ်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သူများရှိခဲ့သည် – စည်းစိမ်ဥစ္စာနီးပါးဆက်ဆက်အာမခံဖြစ်ကြောင်းလောင်းကစားသမားရဲ့မျက်နှာသာအတွက်ဤမျှလောက်အလေးသာထည့်လေ့မရှိသော. ဤအနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၌, မည်သူမဆိုအမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့လောင်းကစားဝိုင်း system ကိုတွေ့ပြီ? လောင်းကစားခြင်းတွင်မည်သည့်အရာကမျှအနိုင်မရနိုင်သည့်စနစ်များကိုတွေ့ရှိသည်ဟုဆိုသောလူများရှိသည်, သင်ကြားရသည့်လောင်းကစားစနစ်အများစုသည်အထူးသဖြင့်လောင်းကစားခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်; ထိုကဲ့သို့သော Blackjack အဖြစ်, Poker, သို့မဟုတ်ကစားတဲ့. လောင်းကစားခြင်းနေရာများအတွက်စနစ်များအကြောင်းစာအုပ်များစွာရှိသည်, အများစုမှာအချိန်နှင့်ခွန်အားများစွာကိုသူတို့၏ရွေးချယ်မှုဂိမ်းအပေါ်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်. အချို့သောဂိမ်းများတွင် ပိုမို၍ အနိုင်ရပြီးနောက်ရှုံးနိမ့်သောသူများရှိကြောင်းငြင်းခုံစရာမလိုပါ; ယနေ့ခေတ်တီဗွီတွင်တွေ့ရသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပီကာကစားသမားများကိုသာကြည့်ပြီးသူတို့၏အနိုင်ရရှိမှုအပေါ်သက်သောင့်သက်သာစွာနေထိုင်ကြသည်. ဒီပညာရှင်တော်တော်များများဟာ Poker မှာဘယ်လိုအနိုင်ရရမလဲဆိုတဲ့စာအုပ်တွေရေးထားတယ်, ဖြစ်နိုင်သည်မှာသူတို့၏အကြံဥာဏ်သည်အကျိုးရှိပြီးအကျိုးအမြတ်ဖြစ်နိုင်သည်. လေးနက်လောင်းကစားသမားသည်, အကောင်းဆုံးလုပ်ရမှာကဂိမ်းတစ်ခုရွေးခြင်းဖြစ်သည် – အများဆုံးနှစ်ခု – တတ်နိုင်သမျှသုတေသနလုပ်ပါ. ဂိမ်းလေ့ကျင့်ကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်သင်အလွယ်တကူအနိုင်ရမဟာဗျူဟာများနှင့်အတူတက်လာနိုင်သူလူတစ် ဦး ၏ကြင်နာမကျမည်အကြောင်းတည်း. များသောအားဖြင့်တော့များသောအားဖြင့်သင်္ချာဆိုင်ရာကိစ္စများဖြစ်သည်, နှင့်အချို့သောလူများအတွက်သင်္ချာရုံသူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဝတ်စုံကိုမဟုတ်ပါဘူး. အောင်မြင်သောလောင်းကစားသမားများတည်ထောင်ပြီးသောစနစ်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, သူတို့ကသင့်အတွက်အလုပ်လုပ်လားကြည့်ပါ ဦး. သူတို့ကိုတီထွင်သူမည်သူမဆိုနှင့်စနစ်များကွာခြားသည်, သင့်အတွက်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုမဆုံးဖြတ်မီကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များကိုစမ်းသုံးရန်အတွက်အချိန်တန်သင့်သည်. သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုနည်းစနစ်တစ်ခုအနေနှင့်သင့်အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဟုမခံစားရမချင်းသေးငယ်အောင်ထားပါ. စနစ်များတည်ရှိပါဘူးပေမယ့်လောင်းကစားသမားရဲ့မျက်နှာသာအတွက်အလေးသာပိုပြီးထားနိုင်ပါတယ်, လောင်းကစားခြင်းသည်အန means တရာယ်ရှိသည်ဟုဘယ်တော့မျှမမေ့ပါနှင့်, နှင့်ဤအန္တရာယ်များကိုတကယ်လုံးဝချန်လှပ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်. သင်၏ဘဝကိုငွေစုဆောင်းခြင်းကိုလောင်းကစားခြင်းစနစ်ထဲသို့နစ်မြုပ်စေခြင်းသည်မိုက်မဲရာကျပြီးစည်းစိမ်ဥစ္စာသို့လမ်းပြလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သော, နှင့်မည်သည့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကစားသမား, ဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်ပါစေ, ဒါနဲ့သဘောတူလိမ့်မယ်. ဒါကဆိုပါတယ်ခံရ, သင်အဆင်ပြေစွာဆုံးရှုံးနိုင်သည့်ငွေအနည်းငယ်ဖြင့်စတင်ခြင်းအားဖြင့်လောင်းကစားစနစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်မထိခိုက်ပါ, သင့်အတွက်မည်သည့်စနစ်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုမြင်ခြင်း. သင်နိုင်ရင်, သင်၏အနိုင်ရရှိမှုနှင့်အတူလောင်းကစား, သင်စတင်ခဲ့သောပမာဏကိုဘေးဖယ်ထားပါ. အဲဒီအကြံဥာဏ်, ဝေးကွာ, အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သောလောင်းကစားခြင်းစနစ်ဖြစ်နိုင်သည်. အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့လောင်းကစားစနစ်
Michelle Wie ၏အံ့သြဖွယ်အချိန်ဇယား
ဂေါက်သီးတွင်အကြီးမားဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး မှာ Michelle Wie ဖြစ်သည်. ဟိုနိုလူလူတွင်မွေးဖွားသည်, အောက်တိုဘာလအပေါ်ဟာဝိုင်ယီ 11, 1989; Michelle အမျိုးသမီးဖြစ်ရပ်များအတွက်သူမ၏ထူးချွန်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်ယောက်ျားရဲ့ဖြစ်ရပ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်အတွက်သူမ၏ရန်လိုသည်. သူမဖြစ်ရပ်များသို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်ခွင့်ရမယ်လို့ယူဆရသောလမ်းအကြောင်းကိုမကြာသေးမီကပြောဆိုမှုများအနည်းငယ်ရှိနေစဉ်, ငါအစားကျနော်တို့ယနေ့အထိသူမ၏အံ့သြဖွယ်အောင်မြင်မှုများအချို့ကိုကြည့်ချင်ပါတယ်ထင်ခဲ့တယ်, ကြောင်းသူမကယခု၌တည်ရှိ၏အံ့သြဖွယ်အနေအထားမှသူမ၏တယ်. – Michelle သည်အသက်အရွယ်၌ပထမဆုံးဂေါက်သီးကစားခဲ့သည် 4, နှင့်သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးကစားခဲ့ပါတယ် 18 အသက်အရွယ်မှာအဝိုင်း 7, ဂိုးသွင်းတယ် 14 ကျော်တန်း. – အသက်အရွယ်မှာ 12 သူမ LPGA ပြိုင်ပွဲအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီတဲ့အငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည် (အဆိုပါ Takefuji ဂန္ထဝင်). ထိုအခါရုံမှာ 13 သူသည် Kraft Nabisco Championship တွင် LPGA ဖြတ်တောက်မှုတွင်အငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်. – ရုံမှာ 14 သူမ ၆ ပေကျော်မြင့်သည်. ထိုအမှာသာ 15 သူမ LPGA ဖြစ်ရပ်များတွင်ဒုတိယနေရာပြီးဆုံးခဲ့သည်, နှင့်လေဖြတ်ရုံစုံတွဲတစ်တွဲအားဖြင့်အနည်းငယ်ယောက်ျားရဲ့ဖြစ်ရပ်များသို့ဖြတ်လွဲချော်. – သူမသည်သူမလှည့်ရုံပြီးနောက်လိုလားသူလှည့် 16, နှင့်သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးယောက်ျားရဲ့ဖြစ်ရပ်သို့ဖြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏. သူမသည်ယခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ဖြစ်ရပ်များများစွာသို့ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာဖိတ်စာလက်ခံရရှိသည်, သူမနေဆဲလှည့်မထားပါဘူး 17. အခုသူတို့ကျိန်းသေအချို့အံ့သြဖွယ်အောင်မြင်မှုဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမယ့်တကယ် Michelle အောင်မြင်ခဲ့သောအရာကိုသာနမူနာပါပဲ. သင် Michelle ရဲ့ဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုအပြည့်အဝအချိန်ဇယားကြည့်ဖို့လိုပါလျှင်, အလည်အပတ်ခရီး. Michelle Wie ၏အံ့သြဖွယ်အချိန်ဇယား